ချစ်ဇာတ်လမ်းတိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့် ၁၄ ခု – Gentleman Magazine
ခဈြဇာတျလမျးတိုငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး အခိုကျအတနျ့ ၁၄ ခု
၁. နှစ်ယောက်ထဲ ပထမဆုံး ထွက်လည်ဖူးတဲ့နေ့၊ လက်ထပ်တဲ့ နေ့လောက်ကို စိတ်လှုပ်ရှားရပြီး နောင် ပြန်အမှတ်ရစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။
၂. ပထမဆုံးအကြိမ် မနမ်းခင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်နေကြတဲ့ တခဏလေး၊ ပထမ အနမ်းဟာ သူငယ်ချင်းဘဝနဲ့ ရည်းစားဘဝကို စည်းခြားလိုက်တာပါပဲ။
၃. ပထမဆုံး နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်တင်းနှောဖူးချိန်လေး
၄. ပထမဆုံးအကြိမ် နှစ်ယောက်တူတူ တစ်ညလုံး ရှိခဲ့တဲ့ ညလေး
၅. အိပ်ရာထဲမှာ ဘာမှမလုပ်ပဲ နှစ်ကိုယ်တူလှဲနေရတဲ့ အချိန်လေး။ ပထမဆုံးရော လက်ရှိချိန်ထိပါ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
၆. သူမရဲ့ မိသားစုဟာ သင့်မိသားစုပါ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်၊ တချို့သူတွေမှာ အဆင်မပြေတဲ့ မိသားစုတွေ ရှိတတ်လို့ သင့်ရည်းစားရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ပထမဆုံး တွေ့လိုက်ချိန်မှာ အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်သွားရင် ခံစားလိုက်ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေး
၇. သင့်ရဲ့ ချစ်သူကို လေယာဉ်ဆိပ်၊ ကားဆိပ်မှာ သွားကြိုရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေ၊ ကြာကြာခွဲပြီး ပြန်တွေ့ရတဲ့ အခါလေးတွေ
၈. သင့်ချစ်သူအိမ်မှာထားဖို့ သွားပွတ်တံ အသစ်တစ်ချောင်း ဝယ်ရတဲ့ အချိန်၊ အဲဒါဟာ သင် သူမဆီကို လာချင်တဲ့ အချိန် လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ
၉. ရန် အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပြီးနောက်မှာ သင်က သူမနဲ့ လုံးဝ လမ်းမခွဲချင်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်၊ အကောင်းဆုံး အချိန်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့် ဒီလို အချိန်လေးတွေက သင် သူမကို တကယ် ချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သိစေပါတယ်
၁၀. မတော်တဆ ချစ်တယ် လို့ ပြောမိသွားပြီး သူမက အလားတူ ပြန်ပြောမှာကို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ စောင့်နေရချိန်
၁၁. သူမနဲ့ တူတူ အပျော်ခရီးထွက်ရချိန်၊ သူမနဲ့ ပဲခူးကို နှစ်ယောက်ထဲ တစ်ညအိပ်သွားတာက မိသားစုနဲ့ ငပလီကို တစ်ပါတ်သွားတာထက် ပိုပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်
၁၂. ခွေး သို့မဟုတ် ကြောင်တစ်ကောင်ဝယ်ပြီး သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ သက်ရှိတစ်ကောင်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် တူတူ ပျိုးထောင်နိုင်ပြီလို့ သိလိုက်ရချိန်လေး
၁၃. သင် အခက်အခဲ ကြုံနေရချိန်တွေကို အတူတူကျော်ဖြတ်စဉ်မှာ သင့်ချစ်သူသာ နံဘေးမှာ ရှိနေရင် အခက်အခဲတွေက အနည်းငယ် ပြေလျော့သွားချိန်
၁၄. သင်တို့ နှစ်ယောက်ထဲ၊ တခြားဘာမှ မပါပဲ နေ့လေးတစ်နေ့ကို အတူတူကျော်ဖြတ်ရချိန်
၁. နှဈယောကျထဲ ပထမဆုံး ထှကျလညျဖူးတဲ့နေ့၊ လကျထပျတဲ့ နလေ့ောကျကို စိတျလှုပျရှားရပွီး နောငျ ပွနျအမှတျရစရာ တဈခု ဖွဈလာမှာပါ။
၂. ပထမဆုံးအကွိမျ မနမျးခငျ တဈယောကျကို တဈယောကျ ကွညျ့နကွေတဲ့ တခဏလေး၊ ပထမ အနမျးဟာ သူငယျခငျြးဘဝနဲ့ ရညျးစားဘဝကို စညျးခွားလိုကျတာပါပဲ။
၃. ပထမဆုံး နှဈကိုယျတူ ခဈြတငျးနှောဖူးခြိနျလေး
၄. ပထမဆုံးအကွိမျ နှဈယောကျတူတူ တဈညလုံး ရှိခဲ့တဲ့ ညလေး
၅. အိပျရာထဲမှာ ဘာမှမလုပျပဲ နှဈကိုယျတူလှဲနရေတဲ့ အခြိနျလေး။ ပထမဆုံးရော လကျရှိခြိနျထိပါ ခဈြဖို့ကောငျးပါတယျ။
၆. သူမရဲ့ မိသားစုဟာ သငျ့မိသားစုပါ ဖွဈသှားနိုငျတယျဆိုတာ သိလိုကျရတဲ့ အခြိနျ၊ တခြို့သူတှမှော အဆငျမပွတေဲ့ မိသားစုတှေ ရှိတတျလို့ သငျ့ရညျးစားရဲ့ မိဘတှနေဲ့ ပထမဆုံး တှလေို့ကျခြိနျမှာ အဆငျပွပွေေ ဖွဈသှားရငျ ခံစားလိုကျရတဲ့ ပြျောရှငျမှုလေး
၇. သငျ့ရဲ့ ခဈြသူကို လယောဉျဆိပျ၊ ကားဆိပျမှာ သှားကွိုရတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးတှေ၊ ကွာကွာခှဲပွီး ပွနျတှရေ့တဲ့ အခါလေးတှေ
၈. သငျ့ခဈြသူအိမျမှာထားဖို့ သှားပှတျတံ အသဈတဈခြောငျး ဝယျရတဲ့ အခြိနျ၊ အဲဒါဟာ သငျ သူမဆီကို လာခငျြတဲ့ အခြိနျ လာခဲ့မယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ
၉. ရနျ အကွီးအကယျြ ဖွဈပွီးနောကျမှာ သငျက သူမနဲ့ လုံးဝ လမျးမခှဲခငျြဘူးဆိုတာ သိလိုကျရတဲ့ အခြိနျ၊ အကောငျးဆုံး အခြိနျလို့ ပွောလို့မရပမေယျ့ ဒီလို အခြိနျလေးတှကေ သငျ သူမကို တကယျ ခဈြတယျဆိုတာ ကိုယျ့ဘာသာ သိစပေါတယျ
၁၀. မတျောတဆ ခဈြတယျ လို့ ပွောမိသှားပွီး သူမက အလားတူ ပွနျပွောမှာကို ရငျတခုနျခုနျနဲ့ စောငျ့နရေခြိနျ
၁၁. သူမနဲ့ တူတူ အပြျောခရီးထှကျရခြိနျ၊ သူမနဲ့ ပဲခူးကို နှဈယောကျထဲ တဈညအိပျသှားတာက မိသားစုနဲ့ ငပလီကို တဈပါတျသှားတာထကျ ပိုပြျောဖို့ ကောငျးပါတယျ
၁၂. ခှေး သို့မဟုတျ ကွောငျတဈကောငျဝယျပွီး သငျတို့နှဈယောကျဟာ သကျရှိတဈကောငျကို အောငျအောငျမွငျမွငျ တူတူ ပြိုးထောငျနိုငျပွီလို့ သိလိုကျရခြိနျလေး
၁၃. သငျ အခကျအခဲ ကွုံနရေခြိနျတှကေို အတူတူကြျောဖွတျစဉျမှာ သငျ့ခဈြသူသာ နံဘေးမှာ ရှိနရေငျ အခကျအခဲတှကေ အနညျးငယျ ပွလြေော့သှားခြိနျ
၁၄. သငျတို့ နှဈယောကျထဲ၊ တခွားဘာမှ မပါပဲ နလေ့ေးတဈနကေို့ အတူတူကြျောဖွတျရခြိနျ
Previous: ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ဖြည့်တင်းဖို့ နည်းလမ်း ၈ မျိုး
Next: လေယာဉ်စီးတဲ့အခါ လေယာဉ်မယ်တွေ မပြောတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်(၁၀)ခု